Izindaba - Ithambo lensimbi lesakhiwo esinezitezi eziningi ezindizeni zezindiza zaseShenzhen selingaphansi kokufakwa
Ithambo lensimbi lesakhiwo sensimbi (No. 7) eShenzhen Airlines Headquarter-Guangdong Honghua Construction Co., Ltd, noma eHonghua, libhekele ukukhiqizwa nokufakwa. Ngiyabonga Shenzhen Airlines kanye neHunan Construction futhi.
Isakhiwo esinesitezi esisodwa sakhiwa esinezitezi eziphansi kuphela. Bona incazelo yesakhiwo esinesitezi esisodwa ukuthola eminye imininingwane. Isakhiwo esinezitezi eziningi siyakhiwa esinezitezi eziningi, futhi siqukethe ukusakazwa okumi mpo ngendlela yezitebhisi, izitebhisi namakheshi.
Enye yezinzuzo ezinkulu zokwakha ikhaya eliyizitezi eziningi ukuthi indawo yokuhlala icishe iphindwe kabili, iphindwe kathathu (kuya ngenani lezitezi) uma iqhathaniswa nendlu eyodwa eyisitezi eyakhiwe esizeni esifanayo somhlaba. Ngaphezu kwalokho, ngesinqumo sokwakha phezulu ungakhulisa endaweni yakho yegceke ngokungadingi ukwakha ikhaya elibanzi ukuze uthole indawo enhle yokuhlala.
Imizi enezitezi eziningi inikezela ngokuhlukaniswa okungcono kwendawo yokuhlala. Kokunye, ezimweni eziningi kunokuhlukaniswa phakathi kwezindawo zokulala nezinye izindawo zokuhlala njengoba iningi lamakamelo okulala livame ukuba phezulu ngenkathi izindawo ezifana nekhishi, igumbi lokudlela negumbi lokuhlala zihlala phansi. Ngakho-ke mancane amathuba okuthi uphazamiseke lapho ulele. Futhi, amakhaya anezitezi eziningi kaningi ahlinzeka ngezinketho eziningi maqondana nokuhlelwa nokuklanywa.